10 Ọ bụrụ na di na nwunye eyiri “mmadụ ọhụrụ ahụ nke e kere dị ka uche Chineke si dị, n’ezi omume na iguzosi ike n’ihe,” ọ ga-eme ka ha ghara ịkwa iko. (Efe. 4:24) Ndị niile yiiri mmadụ ọhụrụ ahụ na-eme ka akụkụ ahụ́ ha “nwụọ n’ihe banyere ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu.” (Gụọ Ndị Kọlọsi 3:5, 6.) Ihe a Baịbụl kwuru pụtara na anyị ga-agbalịsi ike ka anyị ghara ime ihe ọjọọ na-agụ anyị. Anyị agaghị eme ihe ọ bụla ga-eme ka anyị chewe otú anyị na onye na-abụghị di anyị ma ọ bụ nwunye anyị ga-esi nwee mmekọahụ. (Job 31:1) Ọ bụrụ na anyị na-edebe iwu Chineke, anyị ‘ga-akpọ ihe ọjọọ asị, ma jidesie ezi ihe ike.’—Rom 12:2, 9. 11. Ọ bụrụ na di na nwunye eyiri mmadụ ọhụrụ, olee otú ọ ga-esi mee ka ha dịkwuo ná mma?
mailto:?body=Kwee Ka Jehova Mee Ka Gị na Di Gị ma Ọ Bụ Nwunye Gị Na-adị ná Mma ma Ghara Itisa%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015043%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Kwee Ka Jehova Mee Ka Gị na Di Gị ma Ọ Bụ Nwunye Gị Na-adị ná Mma ma Ghara Itisa